पुण्य गौतमको राजनीतिमा छलाङ, माधव नेपालले सुम्पिए यति ठूलो जिम्मेवारी ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारपुण्य गौतमको राजनीतिमा छलाङ, माधव नेपालले सुम्पिए यति ठूलो जिम्मेवारी !
पुण्य गौतमको राजनीतिमा छलाङ, माधव नेपालले सुम्पिए यति ठूलो जिम्मेवारी !
फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक लोकप्रिय पुण्य गौतमले राजनीतिमा फड्को मारेका छन् । गौतम नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटिमा चयन भएका हुन् ।
गौतमले आफू नेकपा एसको केन्द्रीय सदस्य बनेको कुरा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत बताएका छन् । गौतमले आफूलाई केन्द्रीय कमिटिमा मनोनयन गरेकामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई धन्यवाद दिएका छन्। आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा
उनले लेखेका छन्ः ‘मलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रिय स।कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननिय पुर्व प्रधानमन्त्री क.माधव नेपाल र हाम्रो पार्टीप्रती हार्दिक आभारी छु’ फेबसकु, युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल चलाउने प्रयोगकर्तामध्ये उनलाई नचिन्ने सायदैं होलान् ।
तत्कालिन समयमा उनलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाईएको र अन्तिममा समयमा नाम काटिएको चर्चा पनि हुने गर्दछ । उसो त गौतम राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा चिनिन्छन् ।